संभोग अघि महिलाले यी कुराहरु गर्छन, रोचक तथ्य थाहा पाए छक्क पर्नुहुन्छ तपाई ! – jagritikhabar.com
संभोग अघि महिलाले यी कुराहरु गर्छन, रोचक तथ्य थाहा पाए छक्क पर्नुहुन्छ तपाई !
सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन दुबेतिरबाट कोशिश हुन जरुरी छ । केटा केटी दुबैले चाहान्छ उनीहरुबीचको सम्बन्ध लामो समय चलोस । तर सम्बन्धलाई टिकाइराख्न सबैभन्दा महत्वपुर्ण कुरा हो माया ।
प्रत्येक जोडीले चाहान्छन् उसको पार्टनरले यति सधै यति धेरै माया गरोस र उ जीवनभर टाढा नहोस । हामी सबैलाई थाहा छ कि केटीहरु यस्ता धेरै कुरालाई सधै लुकाएर राख्छन् जसलाई हामीहरु केहिल्यै बुझ्नै पाउँदैनौं ।
उदाहरणका तपाईलाई अहिलेसम्म जानकारी छैन कि पार्टनरले तपाईभन्दा अघि अरु कसैसँग सम्बन्ध कायम गरेको छ कि छैन । त्यसैले केटीहरुलाई बुझ्न निकै गाह्रो छ ।
र तपाईलाई थाहा छ केटीहरु सम्बन्ध राख्नु अगाडि के गर्छन् भनेर । जसका बारेमा उसको साथीले पनि थाहा नहोस । तर आज हामीलाई यसबारेमा जानकारी गराउँछौ । आउनुहोस यसबारेका केही रोचक जानकारी
केटीहरु कहिल्यै चाहादैनन पार्टनर
केटीहरुले कहिल्यै पनि उसको पार्टनर आफूसँग रिसाएको मन पराउदैनन् । त्यसका लागि उसले सके जति प्रयास गर्छे । जसले गर्दा उसको पार्टनर उप्रति अरु आर्कशित होस । त्यसैले सम्बन्ध राखनु अघि उसले आफ्ना गुप्ताङ राम्रोसँग सफा गर्छे ।
थोरै मात्रै केटीहरुलाई मोटी मन पर्छ
थोरै मात्रै केटीहरुलाई मोटी केटी मन पर्छ । यसकारण केटीहरुलाई सधै एउटा कुराको डर हुन्छ । मोटी भएका कारण कतै मलाई छोड्ने त होइन भनेर । त्यसैले केटीहरुले आफ्नो खानामा विशेष ध्यान दिन्छन् ।
पार्टनरलाई आफूतिर आकर्षित गर्ने
पार्टनरलाई आफूतिर आकर्षित गर्न केटीहरुले आफ्नो ड्रैसअपमा विशेष ध्यान दिन्छन् । र अझै रातभरी केटीको पूरा कोशिश हुन्छ कि आफू संसारकै सबैभन्दा राम्री केटी देख्यौं । ताकि उसको पार्टनर उसलाई छोडेर कत्तै नजाओस र धेरै माया गरोस् ।
केटीहरु शरीरिक सम्बन्ध कायम गर्नुभन्दा अगाडि आफ्नो शरीर
कतिपय केटीले सम्बन्ध राख्नु अघि आफ्नो शरीर वास पनि गराउछन् । किनकी पार्टनरलाई आफ्नो हात र खुट्टा कोमल र नरम लागुन र उ आफूतिर आकृशित होस ।
राती र दिउसो अलग अलग परफ्यूम
केटीहरु सामान्यतयः दिनमा एउटा ब्राण्डका र राती अर्को ब्राण्डको वा दिन र रातमा फरक फरक परफ्यूमको प्रयोग गर्छन् । राति प्रयोग गर्ने परफ्यूम विशेष गरी पाटृनरलाई आर्कशित गर्नका लागि हुन्छ । सेक्स गर्नु भन्दा पहिला केटीहरु परफ्यूम प्रयोग गर्छन् ।